चीनले अनुदानमा दिएको ९ लाख डोज खोप आज नेपाल आइपुग्दै, कति वर्षकाले मात्र लगाउन पाउने ? — Imandarmedia.com
चीनले अनुदानमा दिएको ९ लाख डोज खोप आज नेपाल आइपुग्दै, कति वर्षकाले मात्र लगाउन पाउने ?
काठमाडौँ । चीनले अनुदान दिएको १० लाखमध्ये ९ लाख डोज खोप आज नेपाल आइपुग्दै छ । ८ लाख डोज खोप चीनको राजधानी बेइजिङ र १ लाख डोज खोप स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतबाट आज काठमाडौँ आइपुग्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।